Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Macluumaad loogu talogalay ganacsadaha
Ma u baahantahay ruqsad ganacsi awgiis? Caymisyo caynkee ah ayaan qaadanayaa? Ka akhriso bogga InfoFinlandi arimahaan iyo kuwo kale oo ganacsadaha muhiim u ah Waajibaadka ganacsadaha.
Yaa qabta hawlaha ilaalinta danaha ganacsatada dalka Finland gudihiisa? Waa sidee caymiska shaqa la'aanta ganacsaduhu? Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi Kaalmaynta ganacsadaha.
Dhaqanka ganacsiga Finland
Haddii aad dooneysid inaad ganacsigaaga Finland ku guuleysato, waxaa muhiim ah inaad taqaano dhaqanka ganacsiga Finnishka. Markii aad aqoonsatid waxyaabaha aasaaska u ah dhaqanka ganacsiga Finnishka, ayaad si wanaagsan ugu adeegi kartaa macaamiishaada. Sidoo kale waxaad si wanaagsan u fahmaysaa waxyaabaha ay dadku adiga kaa filanayaan ama kaa sugayaan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi Dhaqanka Finnishka.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 10.01.2019 Boggan war-celin ka soo dir